ငါတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရပ်လိုက်တော့မင်းရဲ့ခရီးကိုတကယ်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မင်းရဲ့အကြံပေးချက်တချို့ကိုမင်းနဲ့မျှဝေမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဟေ့ NoFappers၊ တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်မင်းရဲ့ခရီးကိုတကယ်ကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တဲ့အကြံဥာဏ်တချို့ကိုမင်းနဲ့အတူမျှဝေမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။
by slickspidey367 ရက်ပတ်လုံး
ငါပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဒီ subreddit ရှိသည်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ကူးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ချုပ်တည်းခြင်းနှင့်စည်းကမ်းအတွက်တိုးတက်ချင်သောငါတို့အဘို့အဘို့ဤကဲ့သို့သောအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ခရီးတစ်လျှောက်မှာဒီ subreddit ကိုတတ်နိုင်သမျှများများစားစားသုံးဖို့အကြံပေးချင်တယ်။ တကယ့်ကိုတစ်နှစ်ခွဲကြာအောင်ငါတကယ်ဝေးဝေးနေခဲ့ပြီ၊ အဲဒါဟာငါထက်အများကြီးသာလွန်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါမကြာသေးမီကပြန်ရောက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထပ်တူပြုခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင် ပို၍ ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ငါ "ရူးသွပ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ထပ်တူထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေတာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်ကိုမျှော်လင့်နေသည်" ဟုပြောသောကိုးကားမှတ်မိသောအခါ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဤအချက်သည်မမှန်ကောင်းရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း၊ ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သက်ဝင်လာသည့်နောက်ဆုံးအမှားအယွင်းကိုမြင်တွေ့ရပြီးထိုအမှားကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါဘာကြောင့်ဒီကိုရေးရတာလဲဆိုတာငါ့ကိုသိစေတယ်။ မင်းတို့အားလုံးက fapping နဲ့ဝေးကွာသွားအောင်ထောက်ကူပေးတဲ့ထောက်ပြချက်အနည်းငယ်ကိုသုံးနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် -
*နောင်ပြန်သွားရင်သင် NoFap ဒါမှမဟုတ်အနီးကပ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအကြောင်းကြားပါ၊ နောင်မှာအဲဒီအမှားမျိုးကိုရှောင်ရှားဖို့ဒီတစ်ခါဘာလုပ်မလို့လဲဆိုတာကိုနောက်တစ်ကြိမ်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတာကိုရှာပါ။*
၎င်းသည်သင်လုပ်နေသည့်အရာအားသင့်အားတာဝန်ခံစေရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ လူသားများသည်တာ ၀ န်ခံမှုမရှိပါကတာ ၀ န်ယူမှုမရှိသောသဘာဝရှိသည်။ ၎င်းကိုတစ်စုံတစ် ဦး အားသတင်းပို့ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်လူသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး နှင့်ဆွေးနွေးသောအခါ၎င်းကသင့်အားအားပေးမှုနှင့်ပြင်ပရှုထောင့်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သူတို့ကကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ထင်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကအားလုံးကိုလုပ်ပေးသူများသည်များသောအားဖြင့်အခက်ခဲဆုံးလဲကြသူများမှာမင်းမှာပြproblemနာရှိတယ်ဆိုတာမင်းဝန်ခံနိုင်ဖို့ခွန်အားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်၊ တစ်ခုခုကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာငါဝန်ခံနိုင်ဖို့၊ သူတို့ပြသနာတွေကိုဝန်ခံပြီးဆန္ဒရှိသူတွေကိုငါကြည့်နေတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းထားခြင်းသည်လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်ပြုသောအမှုပြီးသွားလျှင်၊ ဤအချိန်နှင့်သင်မတူကွဲပြားသောအရာများကိုယခုအချိန်၌သင်ပြောဆိုလိုကြောင်းသေချာစေရန်လိုသည်။ သင်သည်ထိုအမှားမှသင်သိရှိခဲ့ရာများကိုဖော်ပြရန်သေချာစေပါ၊ ဒါကတစ် ဦး များအတွက်အခန်းပေးကူညီပေးသည် တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ရှေ့ဆက်စဉ်းစားတွေးခေါ်စကားလက်ဆုံကိုယ့်အမှားအတွက်နောင်တရနေရုံပဲ။ သင်သည်အောင်မြင်သူနှင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့စတင်စဉ်းစားလာမည်။ ငါတို့အားလုံးဟာမပြည့်စုံဘူး၊ ငါတို့အားလုံးဟာပြproblemsနာတွေနဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်သူဆိုတာအမှားတွေကိုလက်ခံတယ်၊ မှားတာကိုခွဲခြားသိမြင်ပြီးအမှားကိုအမှန်ပြုပြင်ပေးတဲ့သူပဲ။ ဒါဟာငါတို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ၊ တည်ဆောက်ခဲ့၊ ပြီးပြည့်စုံခဲ့တယ်။ ဒီတော့ပေါင်းလဒ် ကိုလက်ခံနှငျ့သငျ relapse ပြုဖော်ထုတ်ရန်, သင် relapse လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကြောင့် (အခြားစကားများအတွက်, သင်ပြန်ရောက်သွားတယ်မတိုင်မီရှေ့ပြေး / ဘာဆက်ဖြစ်) ထွက်ရှာ, သင်အနာဂတ်၌နောက်တဖန်ဖြတ်ပြီးလာလျှင်ပြဿနာများအတွက်အဖြေတစ်ခုဖော်ပြ။
အခုဒီအချက်ကအားလုံးရဲ့အကြီးမားဆုံးဖြစ်နေပြီးဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုအများစုရဲ့နောက်ကွယ်မှာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေပြီ။ သင်စဉ်းစားလိုသောအတွေးအခေါ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်ဖြစ်ပြီးထိုအတွေးများကသင့်အားမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အပြုအမူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုအတွေးများသည်နောက်ဆုံး၌သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်သို့မဟုတ်သင်ဖြစ်လိုသူအမျိုးအစားကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ ငါပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ပါ၊ Amy Cuddy ၏ TED ဟောပြောချက်။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုရှည်လွန်းသော်လည်း၎င်းကိုယုံပါ၊ ထိုဟောပြောချက်သည်သင့်အားနည်းလမ်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးကူညီနိုင်ပြီးသင်လုပ်ချင်သမျှဖြစ်လာရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်ရွှေတွင်းဖြစ်သည်။ သင်“ လုပ်ပြီးသည်အထိအတုပြုလုပ်လျှင်” ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သင်၏အတွေးများကိုပြောင်းလဲသောအခါသင်၏အမူအကျင့်သည်အခြေခံအားဖြင့်သင်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်လာနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်မှုမခံစားရဘူးလား။ မအားရ မင်းကြာရှည်နေလိမ့်မယ်လို့မခံစားရဘူးလား ထိုအကြံအစည်အားလုံးကိုမမေ့ပါနှင့်။ သငျသညျဖြစ်လာသည်သည်အထိသင်၏ယုံကြည်မှု, ပြဌာန်းခွင့်နှင့် Self- စည်းကမ်းအတု! စောင့်ကြည့်ပါ ကို TED ဟောပြောပွဲသူမကလမ်းပိုကောင်း up ပြုလုပ်သေးပါဘူး။
ဒါဟာသင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့စိတျထဲမှာစစ်တိုက်ရာတွင်အနိုင်ရဖို့ရှိသည်ဘာကြောင့်ငါ့အအကြောင်းပြချက်မှငါ့ကိုမဆောင်တတ်၏သင်ထင်နဲ့တူဆောင်ရွက်ရန်မောင်းနှင်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကိုလည်းများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆအတွက်အခြေခံသည် သိမြင်မှု dissonanceသင်၏အတွေးများ / သိမြင်မှုသည်သင်၏အပြုအမူနှင့်မကိုက်ညီသောအခါသင်ခံစားနေရသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင် / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆက်လက်စဉ်းစားနေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့။ မင်းဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်လိမ်နေတယ်၊ ဤအရာကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားရသောအခါသင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ သင်၏အတွေးများကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲခြင်း။ သငျသညျဤအနေဖြင့်ပိုမိုရှင်းလင်းချက်သို့မဟုတ်ဥပမာကိုတွေ့နိုင်ပါသည် ဗီဒီယို။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သင်ကသင်၏အတွေးများသို့မဟုတ်သင်၏အပြုအမူနှစ်ခုကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သင်၏ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောအတွေးများနှင့်အပြုအမူများ၏အဆင်မပြေမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေသည်။
ဤသည်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်သည်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲသင်၏စိတ်ထဲတွင်သာဤတိုက်ပွဲကိုအောင်နိုင်ရမည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှည့်စားပြီးသင် NSFW တစ်ခုခုကိုကြည့်နေသည်ဟုမထင်ပါနှင့်၊ သင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်စားနေသည်။ အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလှည့်စားတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အခြေအနေသည်သင်ကာလအတွက်ဆိုးရွားသည်ဟုကောက်ချက်ချပါ။ ဒါကိုမင်းရဲ့စိတ်ထဲတိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးအဲဒါကိုမလိုက်နာပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူ့အပြုအမူကဒီလိုမျိုးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ အခြေအနေတစ်ခုမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၊ စကားပြောခြင်းနှင့်အတွေးများစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင့်အားပြန်လည်စတင်ရန် ဦး ဆောင်လိမ့်မည်။ ဤအရာကိုအချိန်ယူတွက်ချက်ရန်သင်အချိန်မယူပါကသင်၏အပြုအမူနှင့်မကိုက်ညီသောနည်းဖြင့်ပြုမူလုပ်ဆောင်ရန်သင်ကိုယ်တိုင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သိမြင်မှုကင်းမဲ့မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရလိမ့်မည်။ နှိုးဆွသောအတွေးများနှင့်ကိုက်ညီရန်သင်၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲရန်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်။ ဒီတော့မင်းခရီးကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပါ၊ အနည်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည့်လမ်းကြောင်းကိုယူပြီးသင်၏ခွန်အား၊ ချုပ်တည်းမှုနှင့်စည်းကမ်းများကိုတည်ဆောက်ရန်ထိုအချိန်ကိုအသုံးပြုပါ။
*သင်တို့သည်နောက်တစ်နေ့တှငျ fapping, ရက်သတ္တပတ်များနှင့်တစ်လပြီးမြောက်သောအခါအသင်တို့၏အကျိုး system ကိုပြောင်းလဲပါ*
ဤနေရာတွင်သင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ဆုချသည်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်“ ယခုအချိန်ထိကျွန်ုပ်ရရှိသောဆုကျေးဇူးအတွက်ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းမှမိန်းကလေးများ / ယောက်ျားလေးများကိုပုံ / ကြည့်ရှုခြင်း / ကြည့်ရှုသင့်သည်” ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အစဉ်အလာအဟောင်းသို့ပြန်ရောက်ရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်နောက်ထပ်လှည့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား၊ သင်လုပ်နိုင်တာကသင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုဆုချသလဲဆိုတာကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်း၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစားသောက်ဆိုင်တွင်စားခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ တစ်လတာအချိန်ကာလမရောက်မီအထိသင်၏ ps3 / xbox ကိုကိုင်ထားရန်တစ်စုံတစ်ယောက်အားပြောနိုင်သည်။ ဒီဆုဟာသင်နဲ့သင့်ဘ ၀ အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေဖို့ဘာပဲဖြစ်ပါစေသင်ဟာတန်ဖိုးရှိသူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားရကျေနပ်မှုအဖြစ်ယူမှတ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ရမယ်။ သင်အောင်မြင်မှုများကိုကျင်းပပုံနှင့်သင်ကျင်းပသည့်အရာတို့ကိုပြောင်းလဲရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏အတွေးများကိုထိန်းချုပ်နေရုံတင်မက၊ သင်ယခုသင်ပြောနေသည့်အရာကိုလည်းပါသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်အားဆုချခြင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်သည်။ Wow, သင်အမှန်တကယ်သင်၏အသက်တာကိုယခုထိန်းချုပ်ယူ!
နေ့၊ သီတင်းပတ်၊ လအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ သင်နှင့်အတူဖန်တီးမှုကိုရယူပါ၊ ပြက္ခဒိန်တွင်ထည့်ပါ၊ ရက်စွဲများကိုမှတ်သားပါ၊ တစ်ပတ်၊ လ၊ လများ / နှစ်သို့ရေတွက်ပါ။ ဤပန်းတိုင်များကိုသင်တတ်နိုင်သမျှချမှတ်ရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါ။ သင်၏သတိပေးချက်များတွင်ထည့်ပါ။
*စိန်ခေါ်မှုများကိုလက်တွေ့ကျပြီး“ ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ” လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုဖန်တီးပါ*
ဒီအစီအစဉ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲတဲ့အခါလက်တွေ့ကျပါ၊ သင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အတိတ်ကကြုံခဲ့ရဖူးတဲ့အတားအဆီးတွေနဲ့သွေးဆောင်မှုတွေကိုစာရင်းပြုစုပါ။ ဤနေရာတွင်အဓိကအချက်မှာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းတစ်ခုခုမသွားသောအခါသင်မအံ့သြသင့်ပါ။ ဒီခရီးစဉ်မှာမင်းဟာအံ့အားသင့်စရာမလိုချင်ဘူး၊ စစ်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါစစ်သားတွေအံ့အားသင့်သွားတာကိုမြင်ဖူးလား။ မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံတဲ့အခါသူတို့မှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေရှိတယ်။ လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တွေ၊ စစ်သားတွေ၊ ရဲတွေဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာကြာလေ့ကျင့်ရတာလဲသိလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသင်တန်းကသူတို့အလုပ်မှာသူတို့ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ပြproblemsနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေပေါ်လာအောင်ကူညီဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့်သင်ထိုင်ပါ၊ သင်လုပ်နိုင်သည့်ပြeachနာတစ်ခုစီကိုစာရင်းပြုစုပါ၊ ၎င်းတို့ကဲ့သို့ပင်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခု၊ လေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်“ ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်” နှင့်အတူတက်ပါ၊ ထို့နောက်သင်ဤပြproblemsနာများမှမည်သို့လွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်မည်သို့ရှောင်ရှားမည်ကိုနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များဖြင့်ဖော်ထုတ်ပါ။
လူများသည်မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုစတင်သည်၊ ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်သို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူသောအခါသို့မဟုတ်ဘဝအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်သောအခါ၎င်းတို့ကျူးလွန်သည့်ပထမကာလအတွက်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သည်။ ဒါကလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ၊ ဒါကြောင့်လူအများစုကအရင်ကအရမ်းကြိုးစားပြီးကမ္ဘာကိုချီတက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသင်ကြားရတာပါ။ ဒါကဒီအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းပါ! ဒါပေမယ့်ဝမ်းနည်းစရာကဒီအပိုင်းကအချိန်နဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်၊ ပြီးတော့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က“ ကောင်းပြီ၊ ငါနှစ်သိမ့်မှုဇုန်ကနေထွက်လာပြီ၊ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပြန်သွားဖို့အချိန်တန်ပြီ” လို့ပြောလိမ့်မယ်။ သင်၏အကျင့်ဟောင်းများသို့ပြန်သွားရန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဒါကလုံးဝသဘာဝကျတယ်ဆိုတာခင်ဗျားကိုသိစေချင်တယ်။ ဒါကပုံမှန်လူသားတွေလိုမင်းတွေ့ကြုံခံစားရမှာပါ။ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအစာငတ်နေလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်မယ်၊ ဒါဆိုမင်းကပြန်တိုက်ခိုက်တော့မယ်၊ မင်းကမင်းမတိုက်ဘဲပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီရန်ပွဲမှာခွေးအရွယ်လောက်လောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိရန်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်တိုက်လှန်ရန်သင်မည်မျှစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသနည်း။ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်လိုချင်လျှင်“ self talk” ဟုခေါ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံအချို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်၏စိတ်ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယားကဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောပြောပွဲတခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးရှိပါတယ်ဒါကအခြေခံအားဖြင့်မင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာသင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဘယ်လိုစကားပြောနေတာလဲ။ အချို့သောလူမှုရေးစိတ်ပညာဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်များမှလူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှုထောင့်တစ်ချက်မှအမှီသဟဲပြုပြီးသူတို့စဉ်းစားနေသည့်အရာပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယူပြီးဒီခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသိမြင်မှုကင်းမဲ့မှုကိုလျှော့ချပေးတယ်။
သင်သဘောမတူနိုင်သည့်အရာတစ်ခုမှာသင်သည်ယခုပင်မိမိကိုယ်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုအယုံအကြည်ကင်းမဲ့နိုင်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သောအခါတိုင်း၊ နောက်တဖန် .... တစ်ခါတစ်ရံတွင်များစွာသောအခါသမယအဘို့။ မင်းရဲ့ဘဝမှာဒီသံသရာကိုမဖြစ်စေပါနဲ့၊ ငါမင်းအဲဒီလိုမလိုချင်ဘူး၊ သင်ဟာဘဝကိုအပြည့်အဝအသက်ရှင်ချင်တယ်၊ ထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြောနေတဲ့ဒီသံသရာထဲရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကြောင့်သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ၀ န်ခံရမှာပါ။ ဒါဟာဘာမှဆိုးတာမဟုတ်ဘူး၊ ယုံကြည်မှုသည်အလွယ်တကူကျိုးပဲ့နိုင်သော်လည်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ခဏကြာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာအလွန်အဖိုးတန်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးဘဝမှာရှိသင့်တဲ့အရာအားလုံးအတွက်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သင့်တယ်။ ဒီတော့ဒီအတွက်တိုက်ထုတ်ပါ၊ ဒီယုံကြည်မှုအတွက်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စေချင်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီနည်းနဲ့အချိန်ယူပါ, တစ်ကြိမ်မှာတစ်ရက်ယူပါ။ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးလာတာကိုမင်းမြင်နေရပြီ။ ဤယုံကြည်မှုသည်သင် ဆက်၍ သွားနိုင်ရန်ကူညီရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်ခြင်း၏ပျက်စီးခြင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်တစ်မှတ်တိုင်ကျော်ရသောအခါကြှနျုပျတို့ cocky ရဖို့လေ့နှင့်မာနထောင်လွှားအတွက် seeps သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီနည်းကိုမလုပ်ပါနဲ့၊ ဒါကလက်တွေ့ပြန်စဖို့အတွက်သင့်လမ်းကြောင်းရဲ့အစနဲ့တူတယ်။ အကယ်၍ သင်အောင်မြင်လျှင်တစ်ပါတ်ကိုပြောပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ဆုချပါ၊ သို့သော်နောက်ဆုကိုအာရုံစိုက်ပြီးဆက်သွားပါ။ ထို့ကြောင့်ပန်းတိုင်များစွာကိုချမှတ်ခြင်းနှင့်အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းကိုသာချမှတ်ခြင်းသည်မသင့်လျော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ပြောရရင်သင်စတင်နှိမ့်ချပြီးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကိုဆက်လျှောက်သွားတဲ့အခါအားလုံးမရှုပ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။
၎င်းသည်သင်သေချာပေါက်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၏အရင်းအမြစ်အများစုကိုယုံကြည်မှု၊ ယုံကြည်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်သင့်အားကူညီရာတွင်သင့်အားကူညီရန်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သင်ဤမှတဆင့်သင့်ကိုယ်သင်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည် futureme.org ကိုခေါ် site ကို ၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းသင်အီးမေးလ်ကိုသင်ရရှိမည့်ရက်ကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစာတစ်စောင်ရေးပြီးမင်းရဲ့ခရီးကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးသင်အဲဒီ့နေ့အထိအများကြီးပြီးမြောက်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ သင့်ကိုယ်သင်အီးမေးလ်ဖြင့်တာ ၀ န်ခံမှုရှိအောင်လုပ်ပြီး၊ ထိုအချိန်တွင်သင်အောင်မြင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များထားပါ။
ဤရွေ့ကားငါအောင်မြင်မှုရန်အသုံးပြုသောငါ၏အအကြံပေးချက်များအချို့ကိုဝမ်းနည်းပါတယ်ကနည်းနည်းရှည်ပေမယ့်ငါတကယ်သူတို့သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်အားအောက်ပါမှတ်ချက်ပေးပါ။ ဒီခရီးစဉ်မှာအကောင်းဆုံးတွေ၊ မင်းလုပ်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ မင်းအဲဒီမှာမင်းရှိတယ်။ ဒီဘ ၀ မှာမင်းကိုဘယ်သူမှမယုံရင်ငါယုံတယ်။ ငါဒီခရီးကိုဖြတ်ပြီးမင်းကိုကူညီဖို့တခြားသူတွေနဲ့အတူငါဒီမှာရှိနေတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ပြyouနာတခုဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတာခွဲခြားသိမြင်ပါ (ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ ) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုအမှားမျိုးမလုပ်မိဖို့ပါပဲ။ ဤသည်ကညည်းညူခြင်းနှင့်နောင်တရခြင်းတို့ထက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးရှေ့ဆက်စဉ်းစားသောစကားပြောဆိုမှုကိုဖန်တီးပေးသည်။
သင်အောင်မြင်ရမည့်စစ်ပွဲသည်မင်းစိတ်တွင်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်သင့်သည်ဟုမခံစားရပါက၊ “ လုပ်သည်အထိအတု လုပ်၍” ထိုသိမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
သင်တို့၏အကျိုး system ကိုပြောင်းလဲပါ, သင်ဆုလာဘ်သတ်မှတ်ပုံကို။ ရက်သီတင်းပတ်, လ၏အချို့သောငွေပမာဏများအတွက်ဆုလာဘ် Set များနှင့်ပင်တစ်နှစ်!
သင်ရင်ဆိုင်ရမည့်စိန်ခေါ်မှုများကိုလက်တွေ့ကျပြီး“ ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ” ကိုဖန်တီးပါ။ နယ်ပယ် / အားကစား / ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်ရှိလူအားလုံးသည်စည်းကမ်းချက်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်ပြုလုပ်သင့်သည်
သင်ကိုယ်တိုင်ကိုနောက်တဖန်မယုံကြည်နိုင်မီအချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်သင်မယုံကြည်နိုင်ပါ။ ယုံကြည်မှု၊ အရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်ရန်အချိန်ယူသည်။
သင်၏အနာဂတ်မိမိကိုယ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတာ ၀ န်ခံမှုရှိစေပါ။ ဤအရာသည်နောင်တွင်သင်ဖြစ်ချင်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းပြန်စဉ်းစားရန်နှင့်သင့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်အချို့ကိုဖော်ပြရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်သောကြောင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်မည်သူ့ကိုမျှအပြစ်တင်လို့မရနိုင်ပါ။